ikhaya/Videos/Yenza iithebhu kwiFayile Explorer entsha phantsi Windows 11
embi23. Novemba 2021
Ngesixhobo esitsha kunokwenzeka ukwenza i-TABS kwiWindows File Explorer ukuze ufumane iifayile zakho ngokukhawuleza kwaye ufumane umbono ongcono.
Ikwasimahla kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Khawulezisa Windows 10 hlaziya
IWindows 8: Cima ukwandiswa okuzenzekelayo
Yenza iWindows 8 / 8.1 ibha yomtsalane ngaphandle kwesoftware eyongezelelweyo
Iinkqubo zeWindows 8 ziseta imo yokuhambelana
Jika Windows 10 kwiWindows 7
Windows 10 nyusela ukuya Windows 11 inyathelo ngenyathelo
Iqela le-WhatsApp - ngabaphathi kuphela abanokubhala imiyalezo
Ukucocwa kwediski efihliweyo yeWindows 8.1
Qalisa iWindows Explorer njengomlawuli
iakhawunti yomlawuli rus Bluetooth Isiphequluli umshicileli ukuhlola tabs Ibar yomsebenzi! windows 10 11 Windows windows imiyalelo iiwindows hacks Iingcebiso zewindows 2021 windows ubuqili windows ubuqhetseba 2021 iiwindows tutorials
Imiyalezo ye-48 Ukuthandwa kwe-3
Ngesixhobo esitsha kunokwenzeka ukwenza i-TABS kwiWindows File Explorer entsha ukuze ufumane iifayile zakho ngokukhawuleza kwaye ufumane ujongo olungcono. Ikwasimahla kwaye kulula ukuyisebenzisa. ———- Iwebhusayithi yethu: ➡️ https://www.windowspower.de Bhalisa kwiYouTube yethu: ➡️ https://www.youtube.com/user/WindowsPowerDE Bhalisela ijelo lethu ku...
Kwiiyure eziyi-2 ezidlulileyo